Izindaba - Buyekeza izithombe zezimoto zakudala (izimoto zakudala) ukwazisa ngemodeli yezimoto
Buyekeza izithombe zezimoto zakudala (izimoto zakudala) ukwazisa ngemodeli yezimoto
Izimoto ezindala, ezaziwa nangokuthi izimoto zakudala, ngokuvamile zibhekisa ngaphambi kweMpi Yezwe II noma izimoto ezindala. Imoto endala ingumkhiqizo wesifiso. Yimoto ebisetshenziswa abantu phambilini futhi isengasebenza namanje. Igama lesiNgisi yimoto evuthiwe. Inethiwekhi yemodeli ye-0312 inenqwaba yama-athikili mayelana nezithombe zezimoto ezindala. Kodwa-ke, ngenxa yokushoda kwamagama afanele ngenkathi eshicilelwa, awakwazi ukukhonjiswa ngamunye ngamunye okwamanje. Sizozixazulula ngokushesha okukhulu.
ISunstar yethule imodeli yakwaFord i-coupe
Umqondo wemoto yakudala waqala ngo-1973 futhi wavela kosaziwayo bakamagazini waseBrithani nemoto yakudala. Yize ukuhumusha kwayo ngokoqobo kufanele kube "yimoto yakudala yakudala", ngenxa yombala wayo oqinile we-anthropomorphic, igama elithi "imoto yakudala" kungekudala lazuza ukuqashelwa kwabathandi bezimoto zakudala futhi lasakazeka ngokushesha, laba yisihloko esihlanganisiwe semoto endala yabathandi emhlabeni wonke .
I-Acme Ford Model 1932 Ford Roadster
Kodwa-ke, kuze kube manje, ayikho incazelo ejwayelekile eyamukelwe yezimoto zakudala, futhi izazi-mlando zezimoto nabathandi bezimoto zakudala basaphikisana. I-American classic car club ibala uhlobo lomkhiqizo oluthandayo noma imodeli (njengokuthi: ukukhiqizwa kuka-1925-1948) njengeklasikhi ephelele, echazwa ngokuthi “imoto eyejwayelekile, enomklamo omuhle kakhulu, inqubo esezingeni eliphakeme nokukhiqiza”. Ikhetha imikhiqizo yaseMelika, kepha imikhiqizo yaseYurophu inokuzisola kokuphikisanayo.
ISun star yethula imodeli yakwaFord ibhalsamu iTudor
Akuzona zonke izimoto ezindala ezikufanelekelayo ukuba yimoto yakudala. Ukugcinwa kahle kuyisidingo esibalulekile. Emakethe, azikho izimoto eziningi ezinomklamo wakudala. Njengezimoto eziningi ezingabizi kakhulu izimoto zomndeni ezinezivalo, ziyindlela nje yokuhamba.
Ukuhlukaniswa okujwayelekile kwezimoto zakudala
Iqembu elidala lezimoto laseMelika
Ama-antique: zonke izimoto ngaphambi kuka-1930
Ukukhiqizwa: zonke izimoto ngaphambi kuka-1930
Okwakudala: 1930-1948 imoto enhle kakhulu
Ukuvelela: 1946-1972 imoto esezingeni eliphakeme.
Ukukhiqizwa okulinganiselwe: izimoto “zenzuzo ekhethekile” ezikhiqizwe ngamanani amancane ngemuva kweMpi Yezwe II
Iqembu elidala lezimoto laseBrithani
Ngokuvamile, ukwahlukaniswa okubanzi kunakho konke okulandelayo:
Ngaphambi kuka-1918, zonke izimoto ngokuhlanganyela zazibizwa ngokuthi izinto zakudala, ezahlukaniswa zaba ngu-Edward VII nomakadebona;
Imoto kusukela ngo-1918 kuya ku-1931 kwakuwuphawu lokuqala oludumile;
Kusukela ngo-1932 kuya ku-1945, imoto kwakungumkhiqizo odumile;
Ngemuva kweMpi Yezwe II, izimoto ezimele zahlonishwa njengezakudala zanamuhla.
Amanye amakilabhu eChina
Imoto endala: ngaphambi kuka-1925;
Imoto yakudala: 1926-1941;
Thumela okwakudala kwempi: ngemuva kuka-1945.
Ukuhlukaniswa kwe-United States ngokuvamile kuthathwa njengezinga elijwayelekile emhlabeni. Ngoba i-United States ingumbuso wezimoto omkhulu kunayo yonke, inezimoto eziningi zakudala (imakethe enkulu yezimoto zikanokusho eYurophu ngaphambi nangemva kwempi yi-United States), nangemva kwempi, abaseMelika ngezimali zabo ezibonakalayo izinsizakusebenza zacishe zaqeda izimoto zikanokusho zakudala eYurophu.